Hutsva hwehupfumi hweApple muUK iyo ichafanirwa kubhadhara 136 mamirioni mapaundi | IPhone nhau
Uye ndezvekuti isu hatisiye imwe yatinopinda mune imwe, Apple mamaneja anofanirwa kufunga pavanoona kuti kuongorora kwakaitwa ne HM Revenue uye Tsika yakafunga kuti mari inowanikwa nesigine yeapuro yakarumwa yakadzikiswa kubhadhara mitero mishoma.
Uku kuri pachena maneja anowanzoitwa nemakambani makuru ese nemakambani emunyika munyika dzavanoshanda, asi isu tatova pachena kuti kana iri Apple zvinhu zvese zvinotariswa negirazi rinokudza uye panguva ino vachatobhadhara. Poshi kukosha kwakakosha iyo inosvika pamamirioni emamiriyoni gumi nematanhatu.
Basa repamusoro soro rezvehupfumi rinoitwa nekambani uye mutero unowanikwa neUnited Kingdom usaenderane nezvazviri maererano neHMRC uye ndeyekuti mari yaApple yaipenya kusvika gore rapfuura 2015 uye izvi zvese zvinoreva kuti vanofanirwa kubhadhara iyo mari yemari kugadzirisa maakaundi.
Mune ino kesi, Apple haina kunonoka kupindura resolution uye ivo vanotsanangura kuti ivo vari kubhadhara izvo zvinokumbirwa nemutemo kwavari mune zvemitero uye vanotsanangura kuti mitero yakakosha kune hupfumi hwenyika dzakasiyana dzavanoshandira. Ivo vanobva kuCupertino vanovimbisa kuti vanobhadhara mutero zvinoenderana nemutemo, asi isu tatoziva kuti haisi nguva yekutanga kuti dambudziko remutero iri riitike muEurope nekudaro maakaundi avo anoongororwa zvizere. Kuongorora kwerudzi urwu kwakanangana nekubhadharwa kwemitero pane purofiti yakawanikwa zvakajairika kuApple mune chero kona yepasi, saka hazvishamise kuti idzi nhau dzinoonekwa panguva imwechete iyo mhedzisiro yeiyi yakaitwa pachena.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Hutsva hwehupfumi hweApple muUK iyo ichafanirwa kubhadhara 136 mamirioni mapaundi
Apple inofambisa iyo iCloud data yevashandisi veChinese yakananga kunyika yavo